R-4800 Yakareruka Rolator - Yakawedzera Wide Wiri Wheel Walker
Iyi aluminium rollator naKarman yakawedzera upamhi uye inoratidzira mazana mana emapa pahuremu hwevashandisi vebariatric. Iyo rollator yakanyanya kureruka pamakumi maviri emapaunzi uye nyore nyore kupeta kwekuchengetedza kana kutakura.
R-4800 Yakawedzera Wide Aluminium Rollator inorema-basa rollator inoratidzira yakafara 23 ″ mubato wekuvhura uye mazana mazana mana. kurema chinzvimbo. Simbi yesimbi yakasimba uye yakasimba uye chigaro chakapetwa chepasi-chinotendera mushandisi kumira uye kuzorora chero kwavanosarudza pasina dambudziko.
Asina kumaka machena matai ekushandisa kukuru mumba kana kunze. Iyo R-4800 inosangana nezvose zvaunoda uine tarisiro yekukwanisika uye kugadzikana. Iyo R-4800 inoratidzira zviri nyore kushandisa ergonomic ruoko mabhureki uye kupeta kuri nyore kwekuchengetedza nekutakura. R-4800 rollator inopa maneuverability yakakura uye kugadzikana, uye kukwirira kuchinjika kune iko kukodzera chete, inouya nemaviri mavara, burgundy uye nebhuruu. Usadonhedze "anodhura" mabheyaringi uye matema epurasitiki matai anofambiswa nevamwe vanofambisa. Tora mhando uye yakavakirwa zvakanaka ma rollers anomira muyedzo wenguva.
R-4800 - 20 lbs huwandu
SKU: R-4800 Category: Vanotenderera
8, casters nyore kufambisa kunze uye mumba
Kurema w / Bhasiketi kuri 20 lb.
Pakazara Hupamhi Hupamhi 29 padiki.
Chiremera Chechigadzirwa 20 lbs.
Kutumira Kukura 31, L x 33.5, H x 10, W
R-4800 - rollator UPC #
31 × 10 × 34 mukati